हाइकिङ जाने मन छ, तर... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
हाइकिङ जाने मन छ, तर साथी छैनन्? चिन्ता लिन पर्दैन
रवीन्द्र शाही काठमाडौं, पुस ८
तपाईँ हाइकिङ मनपराउनुहुन्छ? तर एक्लै भएर जान सक्नुभएको छैन? त्यसो हो भने तपाईँको समस्या अब समस्या हुने छैन। किन भने समूह नपाएर, कहाँ जाने, कता जाने? अलमलमा परेकालाई हाइक चौतारी उपलब्ध गराउने इभेन्ट आएको छ।
भर्खरै कलेजको अध्ययन सकाएका युवाहरुल यस्तै अभियान ल्याएका छन् जसको उद्देश्य नै हाइक गराउनु हो।
सुर्खतका धर्मराज शाही र दाङका संगम सिंह मिलेर ‘हाइक फर लाइफ’ इभेन्ट ल्याएका छन्। फेसबुकलाई मुख्य थलो बनाएर सुरु यो अभियान अहिले लोकप्रिय बन्दै गएको छ।
काठमाडौं उपत्यका आसपासका डाँडाकाँडामा एक शनिबार फरक पारेर आयोजना हुने उक्त अभियान सुरु भएको छोटो समयमा लोकप्रीय बनेको संचालक धर्मराज शाहीले जानकारी दिए।
साथीसाथी मिलेर हाइकिङ जाँदा,जान मन भएका तर समूह नभएर रोकिएकाहरु पनि जाने वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने सोचबाट यो मास हाइकिङको अवधारणा आएको शाहीले बताए।
‘हामी कलेजका साथीहरु हाइकिङमा जान्थ्यौं, त्यसैक्रममा हामीले यसलाई मास हाइकिङ अवधारणमा लिऔं भन्ने सोच आयो त्यसैबाट सुरु भयो हाम्रो अभियान’ शाहीले सेतोपाटीसँग भने।
सुरुमा नजिकका साथीभाई र उनीहरुले चिनेका मान्छेहरुलाई सहभागी बनाएरु अभियान चलाएका उनीहरु अहिले स्वतस्फुर्तरुपमा सहभागीहरु ग्रहण गरिरहेका छन्।
उपत्यका आसपासमा नपुगेका स्पटहरु पनि रहेको र त्यस्ता स्पटहरु पत्ता लगाएर, आफै गएर अध्यय गरेर, गुगल म्याप हेरेर स्पट निर्धारण गरी इभेन्ट निर्धारण गरिने अर्का संचालक संगम सिंहले जानकारी दिए।
हप्ताभर कामका तनाव, कोलाहलको वातावरणबाट शनिबार रिफ्रेस हुन चाहना राख्नेहरुलाई सामूहिक घुमफिरको प्लेटफर्म आफूहरुले दिन सिंहको भनाइ छ।
‘जसलाई घुम्न रहर छ तर उसँग समूह छैन एक्लै डाँडामा जानसक्दैनन् उनीहरुलाई समूहको व्यवस्था हामी गर्छौ’ उनले भने,‘त्यसमा पनि युवतीहरुको लागि झनै उपयुक्त भएको छ हाम्रो अभियानमा लेडिजहरु नै बढी रहेका छन् उनीहरु दुईचारजना भएर एक्लै जान सक्दैनन्।’
यो अभियान मार्फत हाइकको लागि सबैभन्दा पहिले स्पटक निर्धारण गरी फेसबुक पेजमार्फत स्पटकको जानकारी दिइन्छ। त्यसमा रुची हुनेहरुले त्यहाँ रहेको फोन नम्बर वा म्यासेजमार्फत् बुक गर्नुपर्छ।
त्यसपछि हाइकिङ जाने शनिबार बिहान सात बजे थापथलीमा रहेको ट्रेड टावरमा सबै जना जम्मा हुन्छन् र त्यहाँबाट बसमा जान्छन्। यसको लागि अभियानले आउने जाने बसको व्यवस्था गरेको हुन्छ जुन बस हाइक सुरु हुने ठाउँमा गएर रोकिन्छ।
यसरी हाइकिङ जाँदा सुरुमा एउटा हाइक फर लाइफ लेखेको टिसर्ट दिन्छ अभियानले जसबापत चार सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। त्यस्तै एक सय रुपैयाँ डोनेशन र सय रुपैयाँ यातायात खर्च तिर्नुपर्छ।
यसमा नाफामुलक भन्दा पनि लाग्ने खर्चमात्र लिइने गरेको शाहीले जानकारी दिए। डोनेशन बापत लिएको सय रुपैयाँ जम्मा गरेर असाहय बालबालिकाहरुको शिक्षा दिक्षामा खर्च गरिनेगरी अभियानको ट्रष्टमा राखिने उनको भनाइ छ।
‘हामी न्यूनतम खर्चमा व्यवस्थापन गर्छौ, यसमा हामीले पैसा उठाएर नाफा खादैनौं, आउनेजाने खर्च, खाना खाजा खान लाग्ने खर्च लाग्छ जुन अगाडि नै निश्चित हुन्छ’ शाहीले भने।
घुमफिरसँगै सामाजिककरण पनि सँगसँगै हुने गरेको आफूहरुले पाएको संचालकको भनाइ छ। नचिनेकाहरु पनि सँगै घुम्दा एकआपसमा घुलमिल हुने र विस्तारै एउटा समूह आफै तयार हुने गरेको अनुभव आफैले पाएको शाहीको भनाइ छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस ८, २०७४, ०९:००:०३